ပရမတ် ၄ ပါး	Posted on November 2, 2009	by mettayate ပရမတ် (အရှိတရား) ၄ မျိုး
အာရုံသိစိတ် ၆ပါး မြင်သိစိတ် အဆင်းတစ်ခုခုကို မြင်သည်နှင့်သိ၏။
အညွန်း- အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်- ရွှေပြည်သာ) ရေးသားတော်မူသော လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ၀ိပဿနာ အတွဲ ၁+၂၊ မဂ်ဖိုလ်ရရန်အဆင့်ဆင့်၊ မယ်တော်ကြီးထံ ၀ိပဿနာပေးစာ၊ မဂ်တားဖိုလ်တားအန္တရာယ်များ စာအုပ်၊ Like this:Like Loading...
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← အဘိညာဉ်နှင့် ရဟန္တာ